အိမ်မက်မြေ: Exchange 2003 transaction log files filling up very quickly
1- Makeafull backup of your exchange store using an exchange-aware agent.
Posted by Baganland at 7:49 PM
Extension of Short Term Visit Pass (e-XTEND)
Check Your S-Pass/ EP Status
ရန်သူမျိုးငါးပါး၊ ဒို့တာဝန်လေးပါး၊ ကပ်သုံးပါး
British tabloid Photoshops black guy out but leave...
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်း ၂၃ ဦး ရွေးချယ်ပြီး...
Live dinosaur spotted in LA’s Museum of Natural Hi...
ဘင်လာဒင်အားခြေရာခံနိုင်ရန် ၎င်း၏ယာဉ်မောင်းက FBI ကို က...
၀ီကီပိဒိယက လူသားမျိုးရိုးဗီဇအတွက် အွန်လိုင်းစာကြည်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆ လအတွင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွ...
စက်လှေတစ်စင်း နစ်မြုပ် ၃၈ ဦးသေဆုံး
ရုရှားက အကူအညီပေးနေတဲ့ မြန်မာ အနုမြူ စီမံကိန်း
စစ်တပ်နဲ့ စစ်ဗိုလ် ... (ဆောင်းပါး)
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးအဆင့်အတန်း (ဦး...
ဟောလိဝုဒ်မှရိုက်ကူးခဲ့သော Kung Fu Panda
Google SMS always has your best interests in mind ...
မန်ယူ လီဗာပူး ရာသီအကြိုခြေစမ်းပွဲ သုံးသပ်ချက်
ကမ်းခြေတွင်အပန်းဖြေနိုင်မည့် နည်းပညာကုလားထိုင် ပုံ...
တိုးရစ်ဗီဇာ ထုတ်ပေးရန် ရန်ကုန်ရှိယိုးဒယားသံရုံးမှတ...
ဘလော့ဂ်ဖြင့် တုံ့ပြန်ရန် ဝန်ကြီးဌာနများကို တိုက်တွ...
Jane Bond လက်သစ်များအလိုရှိသည်
ကိုလံဘီယာ ဓားစာခံကယ်တင်မှု စစ်ဆင်ရေး
ဇင်ဘာဘွေအရေး လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် တရုတ် န...
Topless Wii Fit Lets You Exercise In Front Of Your...
Seagate's 1.5-Terabyte Barracuda Desktop Hard Driv...
အော် ..... ဒီလိုကိုး
2008 အတွက် GT မှအကောင်းဆုံး Top 10 Games
Google gets into 3D virtual world with Lively
စင်ကာပူအိမ်ရှင် နှိပ်စက်မှုကြောင့် မြန်မာအိမ်ဖော်တဥ...
Exchange 2003 transaction log files filling up ver...
Jedi Gym: Let the Force be with you
အခုတော့ ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်ကြပြီ (ဂျူး )
Teen arrested after offering to sell his vote on e...
စင်္ကာပူမှ မြန်မာမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ဆိုး
Windows XP has been retired but you can still get ...
5 Simple Steps to Increase your Google Page Rank
Bluetooth ဟာ နည်းပညာ အသစ်ဖြစ်သော်လည်း Radio Freque...
ထူးထူးဆန်းဆန်း သတင်းများ (1)
နည်းပညာ ဗွီဒီယို (1)
ကလူသစ်နဲ့ အလာပ သလာပ
[Baganland] which was originallyapersonal project ofaMyanmar Applications Specialist, was launched in July 2008 onafree Blogspot account. The mission of [Banganland] is simple: Providing up to the myanmar's news and reviews to our readership, which is mainly composed of to understand our countary's latest situation. If you would like to contact me with suggestions, comments or anything else that might go through your mind, please use my mail dreamland1977@gmail.com.
အိမ်မက်မြေ - by Templates para novo blogger